Miaraka amin'ny Spotty ianao dia afaka mihaino ny mozika Spotify ivelanao amin'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Miaraka amin'ny Spotty ianao dia afaka mihaino ivelan'ny mozika Spotify amin'ny Apple Watch
Spotify dia ny fandefasana mozika izay alefan'ny WhatsApp hafatra, avelao aho hanazava. Elaela vao namoaka fanavaozana vaovao sy / na vokatra ho an'ireo orinasa ireo ny Apple mba hampiharana ireo fanatsarana ilaina. Raha ny marina, ny tranga Spotify dia ratsy kokoa satria na dia te-hitazona ny hegemony amin'ny serivisy mozika mivantana aza ianao ary tsy hahafoana ny tany izay lanin'ny Apple Music amin'ny amboletra, Efa ho roa taona lasa izay no nanombohan'ny Apple Watch, ary mbola tsy namoaka fampiharana ho an'ny famantaranandro i Spotify. an'ny Apple. Mahagaga nefa marina.
Soa ihany eo Spotty, fampiharana maimaim-poana mamela ny mpampiasa Spotify hilalao ny mozika tiany amin'ny alàlan'ny Apple Watch ary tsy mila tambajotra, afaka mivoaka hazakazaka (na izay tadiavin'izy ireo) mamela ny telefaona ao an-trano)
1 Spotty no fampiharana tokony navoakan'i Spotify
1.1 Ahoana ny fiasan'ny Spotty
1.2 Poloney ny kinova farany
Spotty no fampiharana tokony navoakan'i Spotify
Rehefa tonga tampoka amin'ny Spotify ny Apple Music amin'ny fandoavana mpampiasa, dia ho tonga ny tomany, ny "Avelako ho anao", ary ny "tokony ho nataontsika io na io." Saingy eo am-pahatongavan'io fotoana io, ireo mpampiasa Spotify Premium izay manana Apple Watch koa dia niandry efa ho roa taona ho an'ny serivisy mozika mivantana mba hanangana fampiharana ho an'ny famantaranandro. Ary toa, toa mbola afaka miandry am-pitoniana ry zareo.
Soa ihany, Andrew Chang, mpianatra sady mpamorona tsy miankina, afaka nameno ny banga noforonin'i Spotify tamin'ny famoronana a fampiharana maimaim-poana mamela ny mpampiasa Spotify Premium handrindra ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny rakikira sy rakikira ho an'ny fihainoana ivelan'ny Internet. Ary tsara izany, satria ny maody an-tserasera dia manamora ny fahafahan'ny mpampiasa mamela ny fitaovany iPhone any an-trano na ao anaty fiara mandritra ny fanazaran-tena.
Ahoana ny fiasan'ny Spotty
Na eo aza ny tsy eo alohan'ny fampiharana ofisialy, ny marina dia Spotty dia fampiharana feno sy avo lenta izay miasa amin'ny maodely Apple Watch rehetra. Raha vantany vao misintona ny Spotty amin'ny iPhone ianao ary mametraka ny fampiharana amin'ny Apple Watch dia mila mandefa ilay fampiharana amin'ny findainao finday ianao ary manome alalana azy hiditra amin'ny kaonty Spotify Premium anao. Rehefa nomena izany fahazoan-dàlana izany ianao dia hiseho ao amin'ny interface Spotty ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny rakikira sy rakikira rehetra.
Afaka misafidy ianao mandrindra playlists na rakikira nanampy ny tranombokinao Spotify, na ny fitambaran'izy roa. Ny hira rehetra ao anaty lisitry ny lisitry ny rakikira na rakikira dia halefa miaraka amina hetsika tsotra amin'ny famadihana ny jiro "Syncing miaraka amin'ny fiambenana" eo amin'ny zoro havanana ambony amin'ny interface Spotty.
Spotty dia mitaky fidirana Spotify Premium manan-kery farafaharatsiny isaky ny 30 andro hitazomana ny lisitry ny lisitra amin'ny Apple Watch na izany aza, tsy toy ny Apple Music syncing, Spotty tsy mitaky anao hampiasana ny Apple Watch handrindranaIzany hoe, azonao atao ny mampifandrindra ny playlist na rakikira mandritra ny diany.
Azo ampifanarahana amin'ny mozika ambaratonga telo kalitao (ara-dalàna, avo na mahery). Ary raha vantany vao vita ny fampifanarahana (miankina amin'ny kalitao sy ny habetsaky ny voafantina ny faharetany), azonao atao ny mametraka ny Apple Watch anao amin'ny maody ivelan'ny Internet ary mihaino ny mozika rehetra ampifanarahana nefa tsy mila mitondra ny iPhone miaraka aminao.
Poloney ny kinova farany
Mbola ao anaty beta i Spotty, noho izany ny traikefan'ny mpampiasa dia mbola tsy lavorary, fa i Chang kosa miasa mba hamahana ireo bibikely alohan'ny famoahana azy. fandefasana, voalahatra mandritra ny herinandro.
Ireo izay efa nanam-potoana nanandramana ny fampiharana, toa an'i Jeff Benjamin avy amin'ny 9to5Mac, dia nanipika fa "Tena nanaitra ahy ny fampiharana sy ny haben'ny poloney efa ananany. Heveriko fa hankafy izany ireo mpampiasa Premium Spotify. "
Spotty dia ho fampiharana maimaim-poana ary raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba fiasa ianao dia azonao atao ny mitsidika ny Tranonkala ofisialy Spotty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Miaraka amin'ny Spotty ianao dia afaka mihaino ivelan'ny mozika Spotify amin'ny Apple Watch
Inona no nitranga tamin'ny farany tamin'ity app ity ..? Tsy mbola namoaka izany izy ireo?
Izy io dia mitarika ahy ny rohy mankamin'ny pejy spotify .. misy mahalala momba izany ve?
misy manana vahaolana momba izany ve?
Tim Cook: "Tsy miala amin'ny hetra izahay"
Toca Store, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra